Rocket Online Shopping မှ Chest Belt အား ကံထူးရှင် တစ်ယောက်အတွက် မဲဖောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Rocket Online Shopping မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါ သည်။
လက်ဖျံကြော ငုတ်နေသူများအတွက် အထူးအသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Standard - 12000 Good One - 15000 Korea - 25000
ကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့ လက်ပတ် ဖေဖေ၊ မေမေ၊ ဖိုးဖိုး၊ ဖွားဖွားကို လက်ဆောင်ပေးဖို.သင့်တော်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ ကျောင်းသားတွေကို ပေးဝတ်ဖို.လည်း သင့်တော်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ဝယ်ဝတ်နိုင်တယ်နော်။ ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ လက်ပတ်ကတော့ သွေးတိုးတာ၊သွေးကျတာကို ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်စေတဲ့လက်ပတ်ပါ၊ သူကခေါင်းကိုက်တာ ၊ကိုယ်လက်ညောင်းညာတာတွေ၊ပင်ပန်းနွမ်း နယ်နေတာတွေ ၊ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖြစ်တာတွေကိုသက်သာစေ ပီး၊ ညဘက်မှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ချြိုက် အိတ်ပျော်စေကာ သွေးလည်ပတ်မူ အားကောင်းစေပါတယ်။ လက်မအီမသာ ဖြစ်တာတွေကိုသက်သာစေပီး၊ ညဘက်မှာနှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် အိတ်ပျော်စေကာ သွေးလည်ပတ်မူအားကောင်းစေပါတယ်။ လက်ပတ်မှာပါဝင်တဲ့ Negative iron က ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ မကောင်းတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုသန့် စင်ပေးပီး ၊မစင် (သို့ )ဆီးကနေ စွန့် ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် သွေးတိုးကျစေတဲ့ဓာတ်နဲ့ အိပ်ပျော်စေတဲ့ဓာတ် ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပါဝင်တဲ့ Infrared က အရိုးအဆစ်နာနေရင်ကောင်းမွန်စေပီး၊ အသည်းရဲ့ခံနိုင်အားကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်၊ပီးတော့ သွေးထဲမှာပါဝင်တဲ ကိုလတ်စထရောကျစေပီး သွေးလည်ပတ်မူကောင်းစေပါတယ်။ သွေးတိုး သွေးကျ ရောဂါခံစားနေရသူများ ၊နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ခံစားနေရသူများ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အလုပ်ပင်ပန်းပီးနွမ်းနွယ်နေသူများ ၊စိတ်ဖိစီးမူများ ပီးအိတ်မပျော်တဲ့ သူများ ၊တနေကုန်ထိုင်ပီး အလုပ်လုပ်သူများ ပတ်လို့ ရပါတယ်ပတ်ထားရင်လည်း စိတ်ကိုလန်းစမ်း စေပီး ဆီးဝမ်း သွေးလေ လည်ပတ်မူကာင်းပါတယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၀တ်မယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲပတ်ပေးထားရမှာပါ ၊ Titanium နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ရေချိုးရင်တော့ ချွတ်ပေးထားပါ။ ဈေးနှုန်း – ၅သောင်း၅ထောင်(Delivery Free)
ဂျပန်ရိုးရာဆေးနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သဘာဝသစ်ဖု သစ်ဥများဖြင့်ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် ဆိုးကျိုးမရှိစေပဲတစ်နေကုန်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းခြင်း၊ အကြောပြေခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေခြင်း ၊ အသားအရည်ကို စိုပြေစေခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်… ညအိပ်ခါနီးမိမိခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ရေသေချာစင်အောင်ဆေး၍ အ၀တ်သန့်သန့်ဖြင့်သုတ်ပါ.. ပြီးနောက်ဆေးထုတ်လေးကို စာမပါသည့်ဘက်ကိုမိမိခြေထောက်ဘက်ထား၍ စာပါသည့်ဘက်ကိုဘူးတွင်ပါဝင်သော ပလာစတာဖြင့် သေချာစွာကပ်ထားလိုက်ပါ ညအိပ်လျှင်လည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ပြီးမနက်အိပ်ယာထလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အပူအပုပ်များနှင့် အဆိပ်များလျော့နည်းသွားပါလိမ့်မည်.. ကပ်ခွာကိုခွာ၍ခြေထောက်ကို ရေစင်အောင် ဆေးလိုက်ပါ တစ်နေကုန်ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ – အသုံးပြုသင့်သူများ – အကြောတပ်သူများ ၊ အပူများသူများ ၊ ခန္ဓာကိုယ်အညောင်းထိုင်သူများ ၊ ကားမောင်းရသူများ ၊ ညဘက်အိပ်မပျော်သူများ အတွက် တစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေပါတယ်.. ဈေးနှုန်း – ၉ထောင် ကျပ် (၁၀ ခု ပါသည်) Delivery free in Yangon
အလေးချိန် လျော့လိုသူများ၊ အားကစားလုပ်သူများ၊ ကျန်မာရေး လိုက်စားသူများ နေ.စဉ် ကီလို အတက်အကျကို တိုင်းတာ မှတ်သားဖို.အတွက် Digital ပေါင်ချိန်စက် ကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ ဓာတ်ခဲ အသေးဖြင့် အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Kilo ဖြင့် ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1 Kilo = 2.2 ပေါင် (pound) ဈေးနှုန်း – ၁၅၀၀၀ (Delivery free in Yangon) ဓာတ်ခဲ အသေး နှစ်လုံးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို့ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။
Wonder Master 22 in 1 Exercise Machine
GYM သွားဖို. ပျင်းနေပါသလား။ (pre order only) ပျင်းနေသော်လည်း လှချင်ပါသလား။ ခန္ဓာကိုယ် တောင့်တင်းတာဟာ လှသည် သာမက ကျန်းမာရေးပါ ကောင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာဘဲ အေးဆေး သက်သာ GYM ဆော့ချင်သလား။ ဒီလိုမျိုး အိမ်မှာ အေးဆေး ကစားနိုင်ဖို. Wonder Master 22 in 1 Exercise Machine ကို Rocket မှတစ်ဆင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် မှာယူလိုက်ပါ။ ၄၈နာရီအတွင်း အိမ်အရောက် ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို.တွင်း ပို.ခ ၃ထောင် ရန်ကုန်မြို.ပြင် ပို.ခ ၅ထောင် * တစ်ပတ်အတွင်း အိမ်အရောက်ပို.ပါသည်။ (တနလာင်္နေ.မှာရင် နောက်တစ်ပတ် တနလာင်္နေ.ရောက်ပါမယ်။) မန္တလေး နဲ. မြိတ်၊ မော်လမြိုင် (ပို.ခ – ၇၀၀၀) အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးသည် (ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေစနစ်) ကျန်မြို.များကိုတော့ ရန်ကုန်ကားဂိတ် အထိသာ ပို.ပေးပါမည်။